भीडभाड बढ्दो छ, कोरोनाबाट कसरी जोगिने ? – Anusandhan Online
मुख्य पृष्ठ /News/भीडभाड बढ्दो छ, कोरोनाबाट कसरी जोगिने ?
भ्याक्सिनमा अर्जुनदृष्टि हुनुपर्‍यो
भ्याक्सिनमा सबैको अर्जुन दृष्टि हुनु जरुरी छ । भ्याक्सिन ल्याउन र लगाउन सरकारको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । दोस्रो लहरमा जस्तो समस्या झेल्न नपरोस् भन्नका लागि खोपलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सुजिताको शव ट्वाइलेटको ट्यांकीमा सडेको अवस्थामा